Banyere Anyị - Haiyang Luhai Electronic Commerce Co., Ltd.
Haiyang Luhai Electronic Commerce Co., Ltd. wuru na 2020 na obodo Yantai, ụlọ ọrụ mmepụta ihe anọ anyị nọ na obodo Tai'an. Mgbe ihe karịrị ọtụtụ afọ nke mmepe, kwa afọ mmepụta ike nke okokụre iko ruru 200,000 tọn 100 ọkụ na ihe karịrị 20 mmepụta edoghi. Uru ya bara uru ruru RMB nde narị isii ma ọ nwere ndị ọrụ 1000.
Anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa aku nnyocha, mmepe, ire na ọrụ nke iko biya kalama, iko nchekwa ite, iko mmanụ a honeyụ ite, iko nri mmanụ na ihendori dispenser, iko iko na nnu shaker na na. Azụmaahịa anyị na-ebupụ na ụwa dum nwere oke ahịa na Europe, America na Oceania nke ụwa niile, na ire ire iko karama bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kacha mma. Ọ bụ nchụso anyị na-adịgide adịgide ka ị bụrụ onye nrụpụta karama kacha mma na China ma mekwaa nnukwu uru maka ndị ahịa anyị.Ọbụna, anyị na-agbasi mbọ ike ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ iji mezuo ihe dị iche iche. Companylọ ọrụ anyị nwere ahụmahụ bara ụba na karama iko.
Luhai nwere usoro azụmaahịa siri ike nke ndị ahịa dabere na akụrụngwa kachasị mma nke ụlọ ọrụ ahụ, ngalaba na-arụ ọrụ ọpụrụiche, ule njikwa njikwa siri ike na usoro mmepụta niile, nyocha na mkpesa oge niile yana ndị ahịa bara uru sitere n'aka ndị otu ọkachamara na mba anyị.
Adgbaso azụmahịa ụkpụrụ nke ibe uru, anyị nwere a pụrụ ịdabere na aha n'etiti ndị ahịa anyị n'ihi na nke anyị ọkachamara ọrụ, àgwà ngwaahịa na asọmpi ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere echiche ọhụụ ma ọ bụ echiche ọhụụ maka ngwaahịa ndị a, biko kpọtụrụ anyị.
Luhai ji ezi obi na-anabata ndị enyi n'ụlọ na mba ofesi iji kwalite imekọ ihe ọnụ na anyị, na-achọ maka nkịtị mmepe na ike amamiihe echi!
Ihe ngosi ime ụlọ
1.HIGH Ogo dị elu nkwenye ngwaahịa, yana ikikere ngwaahịa, iji nye ọrụ azụmaahịa zuru oke.
2.FIRST-KLASS Akpaaka onye nyocha karama, ihe ndozi ihe nkedo, oyi & mkpuchi mkpuchi mkpuchi nyocha, usoro nkwakọ ngwaahịa akpaka, eserese electrostatic.
3. WORLD ere n'WORLDwa Niile Anyị nwere ọtụtụ ụlọ na mba ndị ọzọ ama ama ụlọ ọrụ mmepụta ihe bịanyere aka na mmekọrịta.
Ọrụ 4.24-HOUR Anyị nwere ọrụ awa 24 na ntanetị, nzaghachi ngwa ngwa iji nye gị ahụmịhe mara mma.
5.ỌROF AKWAMKWỌ AKWOFKWỌ KWES DR to iji nye nlezianya ịdị mma na ọrụ ndị ahịa na-echebara echiche, ndị ọrụ anyị nwere ahụmahụ na-adị njikere mgbe niile iji kwurịta ihe ndị ị chọrọ ma hụ na afọ ojuju ndị ahịa zuru ezu.
Anyị iko ngwaahịa agafeela ọtụtụ asambodo n'ụlọ na mba ọzọ, niile akụrụngwa na-gbaara ka nri larịị, otú niile iko ngwaahịa nwere ike ọtụtụ-eji chemical, ọgwụ, nri na ndị ọzọ ubi.